Deutsche Lufthansa AG dia nanambara ny fivoriana ankapobeny isan-taona virtoaly amin'ny 4 Mey
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Deutsche Lufthansa AG dia nanambara ny fivoriana ankapobeny isan-taona virtoaly amin'ny 4 Mey
Ny fivoriana dia hatao saika, hanaiky ny filàna fampiharana ny lalàna mifehy ny aretina ankehitriny mba hiarovana ny fahasalaman'ny tompon-tany
Ny tompon-trano dia afaka mandefa fanontaniana amin'ny Birao Mpanatanteraka hatramin'ny 2 Mey
Miisa telo ny mpikambana ao amin'ny Birao Mpanara-maso
Halefa mivantana ny Fivoriambe isan-taona
ankehitriny, Deutsche Lufthansa AG nanasa ny tompon-tany tamin'ny fivorian'ny faha-68 taonan'ny faha-4 may 2021 tamin'ny 10:00 maraina. Hatao indray izao ny fihaonana, manaiky ny filàna ny fampiharana ny lalàna mifehy ny aretina ankehitriny mba hiarovana ny fahasalaman'ny tompon-tany.
Halefa mivantana amin'ny lufthansagroup.com ny fivoriana fanao isan-taona. Ireo tompon-trano, izay efa nisoratra anarana amin'ny serivisy an-tserasera mialoha, dia afaka mandray anjara amin'ny fifidianana amin'ny Internet.
Ny tompon-trano dia manana fotoana ahafahana mametraka fanontaniana momba ny fandaharam-potoana amin'ny Executive Board amin'ny misasakalina faha-2 Mey. Sambany, ny fanambarana ny tompon-trosa dia azo apetraka ho horonantsary na hafatra am-peo ihany koa.
Angela Titzrath sy Dr. Michael Kerkloh, ireo mpikambana roa ao amin'ny Birao Mpanara-maso natolotry ny Tahirim-bola fanamafisana toekarena ao amin'ny Repoblika Federalin'i Alemana ary notendren'ny fitsarana teo aloha, dia hiatrika ny fifidianana amin'ny 4 Mey.
Stephan Sturm dia hiala amin'ny Biraon'ny Fanaraha-maso manomboka amin'ny famaranana ny Fihaonamben'ny Fiangonana Fanao isan-taona. Amin'ny maha-mpandimby azy, ny Birao Mpanara-maso dia manoro hevitra amin'ny Fihaonamben'ny Jeneraly isan-taona ny fifidianana an'i Britta Seeger.
Singa iray hafa ao amin'ny fandaharam-potoana ny famoronana renivohitra C nahazo alalana vaovao mifanaraka amin'ny §7b WStBG hatramin'ny 5.5 miliara euro miaraka amin'ny fe-potoana dimy taona. Ny fahazoan-dàlana dia mamela an'i Deutsche Lufthansa AG hampiasa mora foana ny fotoana ara-bola mba hampiakarana ny fananana eo amin'ny tsena renivohitra. Ny habetsaky ny renivohitra C nahazo alalana dia teknika iray, nalaina tamin'ny habetsahan'ny Fandraisana anjara mangina I sy II amin'ny Tahiry fanamafisana ny toekarena, satria ny fampitomboana ny renivohitra C dia tokony hampifandraisina mivantana amin'ny famerenana ny fepetra fanamafisana. Raha misy fisondrotana renivohitra, dia homena ny tompona zon'ny mpamorona. Ny orinasa dia tsy nandray fanapahan-kevitra momba ny fampiakarana renivohitra amin'ny fampiasana Capital Capital C.